Katrina Kaif oo boos shaqo kala baxday Kareena Kapoor. - Jilaa News Falanqeynta Fanka iyo Fanaanka
Katrina Kaif oo boos shaqo kala baxday Kareena Kapoor.
2013-01-28 11:34:50Atariishada muuqaalka qurxoon ee Katrina Kaif ayaa lacag culus ku qaadatay iney ka cayaarto aroos weyn oo ka dhacaya magaalada Mumbai, waxayna kamid noqotay Katrina dadka ugu mushaarka badan ee aroos ka dheela.
Laakiin warar hoose ayaa sheegaya in booskaan u taabsanaa Kareena Kapoor oo mar dambe meesha laga saaray, waxaana sabab u ahaa sida la sheegay marti ka timid America iyo Yurub, kuwaas oo codsaday Katrina Kaif.
Kareena ayaa dhinaceeda sheegtay ineysan dib ula macaamili dooninn shaqsiyaad kaas dhulka ku jiiday, maadaama eyada marka hore meesha laga casuumay ha yeeshee looga baxay heshiiska sidaasn ay ku carootay.
kareenakatrina	PreviuosKajol oo miisaankeeda dhintay diyaaarna u ah inay soo laabato.. NextGabar Canadian ah oo dacwad kusoo oogtay Jusin Bieber..	0
Nl gangst - 2013-01-28 07:18:00 sas waye waji nin kareena boska in laga saro way ku ficantahay gooma waynta kkkkkkkkkkkkkkkk
aniga - 2013-01-28 08:06:02 waji nin goom ween dheh yaa kurabo
IDMAN - 2013-01-28 12:37:32 codkaas ani xatee waa kujiri gooman duqda suuq la,an aku dhacdee -1
AmiinAlli - 2013-01-28 12:51:37 kkkkkkkkkkkkk aqyaaarta habartaaas ay ıdınka haysaaa mıyaa viva katrina sweet n cute girl
maano faaay - 2013-01-28 13:05:37 kuwa caaynayo kareena ma waxaad iloowdeen awooda ay ku leedahay bollywood mise daawashada hindiga aa idinku cusub see isu agdhigtaan katrina iyo kareena mise wixii cusub caalamkaa jecel aa wadaan waase suale imisa film ay keentay katr imisaase hit u noqday bye
cadiyos - 2013-01-29 09:55:57 Ama caaya ama isk daaya wey soo noqoneeeeeeee abaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah karina xabad uma haaaaaaaaaaaaaaaaaayo lolz and coz wrong support in katrina kaaaaaaaaaaaaaaif means scifo ama somali iskiifo
Shakira: Waxaan rabaa inaan dhalo ilaa 8 ama 9 caruur ah